CDC: Qeexitaanka 'si buuxda loo tallaalay' ayaa laga yaabaa inay u baahan tahay cusboonaysiin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » CDC: Qeexitaanka 'si buuxda loo tallaalay' ayaa laga yaabaa inay u baahan tahay cusboonaysiin
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Agaasimaha Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Mareykanka (CDC), Rochelle Walensky
Walensky wuxuu ku dhiirri -galiyay dhammaan dadka Mareykanka ah ee u -qalma inay qaataan tallaalada xoojinaya, iyadoo aan loo eegin saamaynta mustaqbalka ay ku yeelan karto xaaladda tallaalkooda.
Dadka degan Maraykanka waxa loo tixgaliyaa inay si buuxda u talaalan yihiin haddii ay haystaan ​​laba qiyaasood oo tallaalka Pfizer ama Moderna ah, ama midda tallaalka looga baahan yahay Johnson & Johnson jab.
Haddii dhiirrigeliyeyaashu ay qayb ka noqdeen shuruudda ah in loo tixgeliyo 'si buuxda loo tallaalay', qaar badan oo durbadii hore la siiyay waxay u badan tahay inay u baahdaan inay helaan xoojiyayaal.
Kobciyeyaasha tallaal kasta oo laga heli karo Mareykanka waxay oggolaansho ka heleen CDC iyo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka, laakiin kaliya kooxaha u qalma.
Dadka Mareykanka ah waxaa loo tixgeliyaa inay si buuxda u tallaalaan haddii ay haystaan ​​laba qiyaasood oo ah tallaallada Pfizer ama Moderna, ama hal tallaal oo looga baahan yahay tallaalka Johnson & Johnson.
Tan waxa laga yaabaa inay dhakhso is beddesho.
Sida uu sheegay Agaasimaha Mareykanka Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC), Rochelle Walensky, ayaa sheegtay in laga yaabo in hay'addu ay hagaajinayso qeexidda “si buuxda looga tallaalay” COVID-19, la oggolaaday oo loo heli karo tallaallada xoojinaya.
Walensky ayaa la weydiiyay shir-saxaafadeedkii maanta, haddii kuwa u-qalma tallaallada xoojinaya ay u baahan yihiin inay qaataan qiyaaso dheeraad ah si ay u sii haystaan ​​xaaladdooda tallaalka oo buuxa.
"Wali ma aanan beddelin qeexidda 'si buuxda loo tallaalay,'" ayuu yiri Walensky, isagoo raaciyay in hadda dhammaan dadka Mareykanka ah aysan u qalmin tallaallada xoojinaya.
"Waxaa laga yaabaa inaan u baahanno inaan cusbooneysiino qeexitaankeenna 'si buuxda loo tallaalay' mustaqbalka," CDC ayuu yiri agaasimuhu.
Haddii dhiirrigeliyeyaashu ay qayb ka noqdeen shuruudda ah in loo tixgeliyo 'si buuxda loo tallaalay', dad badan oo Mareykan ah oo durbadiiba la siiyay waxay u badan tahay inay u baahdaan inay helaan dhiirrigeliyeyaasha si ay u sii wataan xaaladdooda 'la tallaalay'.
Tallaalada xoojinaya tallaal kasta oo laga heli karo Maraykanka ayaa oggolaansho ka helay CDC iyo Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA), laakiin kaliya kooxaha xaqa u leh.
CDC waxay ansixisay qiyaaso xoojin ah oo loogu talagalay dhammaan dadka qaangaarka ah ee helay tallaalka Johnson & Johnson, iyo waayeelka iyo dadka qaangaarka ah ee tallaalka Moderna iyo Pfizer.
Walensky iyo CDC waxay ku dhawaaqeen usbuucan dadku waxay sidoo kale isku dari karaan oo ay isku dari karaan tallaalada xoojiyayaasha si badbaado leh. Wakaaladu waxay sidoo kale maanta shaacisay in u-qalmitaanka xoojiyeyaasha ay balaarin doonto bilaha soo socda.
Walensky wuxuu ku dhiirri -galiyay qof kasta oo u -qalma inuu helo tallaalada xoojinaya, iyadoo aan loo eegin saamaynta mustaqbalka ay ku yeelanayso xaaladda tallaalkooda.
"Dhammaantood aad bay waxtar ugu leeyihiin yaraynta khatarta cudurrada daran, isbitaal dhigista, iyo dhimashada, xitaa iyada oo lagu dhex jiro kala duwanaanshaha baahsan ee Delta," ayuu yiri Agaasimaha CDC.
Marka loo eego xogta CDC ee ugu dambeysay, in ka badan 66% dadka Mareykanka waxay heleen ugu yaraan hal dose oo ah tallaalka COVID-19.